Strawberry maka oyi - ntụziaka
Oge oge strawberry na-abịa ná njedebe ma ndị na-enweghị oge iji kwadebe ọtụtụ goodies si na beri a maka oge oyi kwesịrị ime ọsọ ọsọ.
N'okpuru ebe a, anyị ga-ekwu banyere otu esi edozi mkpụrụ osisi strawberry na-enweghị isi nri, na-esi nri ya, na-enyekwa mkpụrụ osisi griiz na friza ma debe ya na syrup .
Strawberry, nke a na-ejupụta na sugar maka oyi - uzommeputa na-enweghị nri
Strawberry mfri eke mfri - 1 n'arọ;
sugar granulated - 1,3-1,6 n'arọ.
Nke a billet dị mma n'ihi na ọ na-echekwa ihe niile bara uru na mkpụrụ osisi strawberry. Maka nkwadebe ya, a na-asacha mkpụrụ osisi strawberry nke ọma, na-ehichapụ sopals ma gbasaa tomato na akwa nhicha na otu oyi akwa iji kpoo. Strawberries ekwesịghị inwe otu mmiri mmiri tupu owuwe ihe ubi. Na-anakọta tomato dị ọkụ n'ime arịa kwesịrị ekwesị ma wụsa shuga shuga, ọnụego nke a kpebiri dabere na ogo nke mkpụrụ osisi strawberry. Hapụ ọrụ ahụ iji kewapụ ihe ọṅụṅụ maka ihe dịka elekere asatọ ma ọ bụ n'abali, mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-etinye tomato na nkịtị tolkushku ma ọ bụ na-agbanye mmanụ ọkụ.
A na-ekpuchi mkpụrụ osisi strawberry na akwara mmiri iko, bụ nke ejiri sie ya sie ike, ọ bụ ihe dị mkpa na-ekpo ọkụ ma na-echekwa ya na friji. A ga-ewepu akụkụ a nke strawberry n'ime ọnwa anọ ruo ọnwa ise.
Kedu ka esi esi ghaapu strawberries na shuga maka oyi?
sugar ntụ ntụ ma ọ bụ obere sugar - 300 g.
Akpụcha mkpụrụ osisi strawberry dị iche iche, na-asacha ọtụtụ ugboro na mmiri oyi, na-ekpochapụ sepals ma dọba ya na tray plastik ma ọ bụ akpa, na-awụnye oyi akwa ọ bụla na powdered sugar ma ọ bụ obere shuga. Anyị na-etinye ihe ndị a na-arụ na friji maka awa anọ iji kewaa ihe ọṅụṅụ ahụ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị na-agbanwe mkpụrụ osisi strawberries n'ime ihe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị maka ịfrika, wụpụ ihe ọṅụṅụ ahụ a na-asọpụrụ, kpuchie ya na mkpuchi ma tinye ya na oghere nke friza maka nchekwa oyi.
Ụdị Strawberry maka oyi
Strawberry mfri eke mfri - 2 n'arọ;
Lemon nke ọkara nha - 1 pc.;
sugar granulated - 1,3-1,7 n'arọ.
Maka jam, anyị na-ahọrọ mkpụrụ osisi strawberry n'ụzọ zuru ezu, na-asacha ya kpamkpam n'okpuru mmiri oyi na-agba agba ma gbanwee ya na poteto ndị a kụrụ ma ọ bụ na-eji blender. Ugbu a gbakwunye sugar ahụ na berry uka ma nye oge ole na ole iji mebie. Ghichaa ihe ọṅụṅụ ahụ site na lemon, tinye ya na strawberry na sugar wee tinye akpa ahụ na-arụ ọrụ na stovu maka ọkụ ọkụ. Mgbe esi, esi nri, na-adabere na ọchịchọ a chọrọ site na nkeji iri atọ ruo awa abụọ.
Mgbe anyị na-adị njikere, anyị na-agbasa jam na-ekpo ọkụ na ihe ndị na-ekpo ọkụ na nke na-enweghị ntụpọ, kpochie ya ma mee ka ọ dị mma n'okpuru blanketị ma ọ dịkarịa ala awa 24.
Kedu otu esi eme strawberries maka oyi na sirop?
sugar granulated - 1-1,2 n'arọ.
A na-enweta ihe ụtọ na aromatic na-enweghị atụ na strawberries maka oyi na sirop. Na-akwadebe ya, dika dị na nsụgharị ndị ọzọ, saa strawberries, wee tinye ya na enamel ma ọ bụ iko iko, na-agbanye shuga shuga. A na-agbanye okpukpu ikpeazụ nke shuga, anyị na-emechi ụgbọ ahụ na oghere na mkpuchi ma tinye ya na friji maka otu ụbọchị.
Mgbe oge gasịrị anyị gbasara tomato n'ite mmiri iko, jupụta syrup, kpuchie ha na lids ma tinye ha na ịmị ụlọ na nnukwu efere na mmiri. Mgbe minit iri site na mgbe ị na-esi nri zuru ezu, anyị na-akụkọta strawberries na sirop na lids ma mee ka ha dị jụụ n'okpuru blanketị.
Jam sitere na mkpụrụ vaịn na ọkpụkpụ maka oyi
Jam si quince na lemon
Ebube na-acha uhie uhie currants - ntụziaka kachasị mma nke ụtọ jelii ụtọ
Achịcha dị iche iche maka oyi - echiche mbụ maka ịme nri mkpọ nri dị ụtọ
Etu esi esi nri jamberry?
Kedu otu esi emechi cherị cherry maka oyi?
Ntụziaka maka pickled mmanụ maka oyi
Jam si apụl - nke kachasị mma, nke ọhụrụ na nke mbụ maka ọ bụla uto!
Mmiri mmiri na-edozi mmiri - ntụziaka ndị ọhụrụ na ndị ọhụrụ nke nchebe nke oge ochie nke Russia
Salo na yabasị jupụtara n'ụlọ
Jam si plum - uzommeputa
Kedu ka esi atụfu ibu n'ụlọ?
Salad na mgbịrịgba ose - uzommeputa
Mfe achicha uzo - uzommeputa
Ugboro ole ka tulip na-amị mkpụrụ?
Kedu ka esi tufuo mkpọtụ na isi?
Ụlọ akwụkwọ ọta akara Montessori
16 nkuzi nkuzi mgbede
Uwe mmiri na ụlọ
Akpa na ebe di nso
Hot na-apụta n'ụlọ
Nkwupụta nke ara
Ememme nke September 1